Igumbi le-Epiphyte B & B Superior Double - I-Airbnb
Igumbi le-Epiphyte B & B Superior Double
Ikamelo e-i-guesthouse ibungazwe ngu-Matt
Ihlezi phezu kwegquma elincane futhi ibheke i-Thornton's Peak kanye nehlathi lemvula lase-Daintree World Heritage, i-Epiphyte B & B iyindawo ekahle ongayisebenzisa njengesisekelo sokuhlola izixhobo zamatshe, ihlathi nezindawo ezishisayo noma ukuvele uphumule futhi ushaje kabusha.
I-Epiphyte B & B iyindlu eyingqayizivele ehlala endaweni yemvelo emahlathini emvula aseDaintree World Heritage, amahora ama-2 enyakatho yeCairns eduze naseCape Tribulation. Ihlezi phezu kwegquma elincane futhi inokubukwa okumangalisayo ngaphesheya kwehlathi ukuya e-Thornton Peak kanye ne-Alexandra Range, I-Epiphyte iqhele ngamaminithi ambalwa ukusuka emabhishi anokuthula, imigwaqo yokuhamba ngezinyawo kanye nezikhungo zezivakashi futhi iseduze (kodwa kuthule kakhulu kune) hub yezokuvakasha e-Cape Tribulation. Inamakamelo okuphumula ezivakashi kanye namaveranda, ukubukwa okumangazayo kanye namakamelo aphindwe kabili e-en-suite anovulandi wangasese, i-Epiphyte iyindawo ekahle yabantu abangashadile, imibhangqwana noma imindeni/amaqembu. Nethezeka, wehlise umoya, vakashela amabhishi ethu amangalisayo nemigodi yamanzi, uzwe ihlathi lemvula laseDaintree elinomlingo nezitshalo eziqhakazayo ezindala kunazo zonke emhlabeni. Kunamakamelo ama-4 endlini enkulu; 1 single, 1 double & 2 superior double / amagumbi omndeni kanye namakotishi ahlukene ama-2 kude nendlu enkulu.
Izilinganiso zamagumbi zisuka ku-$90/ngokukodwa noma ku-$140 - $160/kabili. I-Golden Orchid Retreat Cottage ne-Hibiscus Cottage kusuka ku-$180/ubusuku. Izintengo zifaka ibhulakufesi elimnandi letropikhi kanye netiye/ikhofi noma nini. Futhi singakweluleka mayelana nokubhukha lonke uhambo nemisebenzi. Uma uzozitholela, uhlole, uqonde, ubonge noma ukhululeke nje uhambe - sibheke ngabomvu ukwabelana nawe ngesiqephu sethu esincane sePharadesi.
Siyathanda ukuhlangana nabanye esihamba nabo, izivakashi ezintsha, izivakashi ezibuyayo. Kukhona indawo evamile evamile yokuhlangana nabanye futhi igumbi ngalinye nalo linevulandi yalo yangasese ukuze kuphume isikhathi esithule futhi nje niphumule ngokubuka iNational Park.
'Siyakwamukela Ekhaya' ku-Epiphyte B & B.
4.91 · 55 okushiwo abanye
Yindawo enhle ... ihlathi lemvula yonke indlela eya emabhishi nasezindleleni zomgwaqo, i-cassowary emahlathini aseduze futhi anokuthula kakhulu. Udinga ngempela izinsuku ezimbalwa ukuze uphumule futhi uphumule lapha kanye nokubona omunye umlingo ophelele we-Daintree!
Sikujabulela ngempela ukuhlangana nabantu abasha futhi izindawo zokudlela nezindawo zokuphumula ezinkulu okwabelwana ngazo namaveranda avulekile akulungele ukuhlangana nezinye izivakashi.
Singakusiza ukuthi ubhukhe noma yiluphi uhambo lwasendaweni nemisebenzi futhi sizoncoma esicabanga ukuthi kuzokufanela kangcono. Singase futhi sikunikeze iseluleko mayelana nalo lonke iholide lakho - izindawo ezinhle ongaya kuzo sikhangise izindawo ezinhle ongazigwema.
Ayikho imali yokubhuka yokubhukha noma yimiphi imisebenzi.
Sikujabulela ngempela ukuhlangana nabantu abasha futhi izindawo zokudlela nezindawo zokuphumula ezinkulu okwabelwana ngazo namaveranda avulekile akulungele ukuhlangana nezinye iziv…